Waqtiyada adagi weligood ma sii jiraan, laakiin dadka adag ayaa ku dhammaada. - Robert H. Schuller - xigasho Pedia
Waqtiyada adagi weligood ma sii jiraan, laakiin dadka adag ayaa ku dhammaada. - Robert H. Schuller
Adkeysiga iyo maskaxda xoog ayaa ku bixi kara wado dheer caawinta na si aan uga gudubno waqtiyada adag. Waxaan ubaahanahay inaan lahaano rajo wanaagsan oo caqli gal ah. Si aan u wajaho waqtiyo adag oo aan uga baxno si guul leh waa inaan ku dadaalnaa sidii aan u heli lahayn xallimaad inaga caawin doona inaan ka baxno xaaladda.
Haddii hal qof keligiis uusan sidaas sameyn karin, waxaa had iyo jeer lagu talinayaa in dadaal wadareed la geliyo si looga gudbo waqtiyada mugdiga ah. Waa in had iyo jeer la xusuusnaadaa in "Tani sidoo kale way dhammaan doontaa". Waxaan kaliya u baahan nahay inaan ku sugno dulqaad iyo rajo.
Dadka barta sida looga gudbo waqtiyada adag isla markaana si aad ah ugu sii hormariya xirfadda ay ku wajahaan xaalad kasta oo adag waa kuwa noqda dad adag.
Iyagu waa kuwa ay kuwa kale ku tiirsan karaan oo dhiirigelin ka heli karaan. Kuwaasi waa kuwa ka caawiya dadka kale inay la qabsadaan xaalad adag maxaa yeelay waxay ku soo barteen waayo-aragnimo - taasina waa had iyo jeer nooca ugu wanaagsan ee barashada.
Dadka u soo gudbiya xilliyada adag waxay runtii fahmaan qiimaha nolosha iyo waxyaabo badan, oo annagana tixgelinno. Waxay ku jireen xaalad markii ay u baahnayn lahaayeen inay wax badan bixiyaan, laakiin way ka soo baxeen. Sidaa daraadeed, runtii waxay aad u qiimeeyaan waxyaabaha yaryar ee nolosha waxayna leeyihiin casharo badan oo ay bartaan.
Hadaad waligaa la kulanto dad sidan oo kale adag, had iyo jeer isku day inaad wax badan ka ogaato wixii ku soo kordha iyo wixii ay bartaan; si markaas aad u hesho fahansi waxa aad samayn lahayd haddii aad dhibaato kala kulanto maalin kasta.
Xigashooyinka ugufiican Waqtiga oo dhan
La Qabsashada Quotanka adag ee Times
Xigashooyinka Hard Times
Xigashooyin adag iyo xigashooyin
La soco xigashooyinka iyo odhaahyada
Soo xigasho Waqtiga
Xigashooyinka ku saabsan Waqtiyada Xun
Xigashooyinka Ku Saabsan Kajawaabida Waqti Adag
Xigashooyinka ku saabsan xoojinta xilliyada adag
Xigashooyinka Gaaban ee Ingiriisiga
Mararka qaarkood Noloshu Way adagtahay xigashooyin
Xigashooyinka ugu sarreeya Waqtiga oo dhan
Quotes Waqti Adag
Markay Noloshu Kusoo Darto Quusin
Rajadaadu ha, ee ha u dhaawacmin, ha qaabeeyaan mustaqbalkaaga. - Robert H. Schuller
Rajadaadu ha, ee ha u dhaawacmin, ha qaabeeyaan mustaqbalka - Robert H. Schuller xigashooyinka laxiriira:
Had iyo jeer fiiri waxa kaaga tagay. Waligaa ha eegin wixii kaa lumay. - Robert H. Schuller
Oraahyadani waxay rabtaa inaad ka hor tagto awooda ugu awooda badan dabeecada aadanaha oo aad horumariso…
Waxqabadka maanta waxa uu ahaa suurta galnimadii shalay. - Robert H. Schuller
Marka aad hadaf leedahay, oo aad si joogto ah ugu shaqeyso, waqti ama mid kale, waad arki doontaa…